Kategorie: Weitere Präventionsthemen – Jugendringe und Jugendverbände
Du bist hier: Startseite / Angebot / Veranstaltungen auf Anfrage / Weitere Präventionsthemen - Jugendringe und Jugendverbände
Anigu waxaan ahay gabar 16-sanno-jir ah waxaana sameeyay galmo mana ihi bikrad. Qoyskayga midaan waxaa looga tixgeliyaa ku xad gudub sharafeed. Waxaan ka cabsanayaa qoyskayga in ay midaasi oggaadan. Maxaan sameeyaa?
18. Oktober 2016 /in Weitere Präventionsthemen - Jugendringe und Jugendverbände /von editorialteam
Midaan waa in ay tahay xaalad adiga murug kuu leh.
Sidaas darteeda waa muhiim in aad fahantid in
sharaftu ay leedahay macno kala duwan hadba dhaqanka qofka ayay ku xirantahay.
Dalka Jarmalka, qofka waxaa loogu tixgelinayaa in uu yahay qof aanan sharaf lahayn
haddii aanan ixtiraamin sharciyada iyo xeerarka dalka u yaala
ama haddii ay garaacaan ama kufsadaan haweenay ama carruur.
Waa sharaf in la caawiyo qof caawimaad iyo ilaalin u baahan.
Dhaqamada qaarkooda dadku waxay u fahmaan sharaftu si kale.
Mararka qaar sharaftu macnaheedu waxay tahay in gabadhu ay ahaato mid bikrad ah illaa ay ka guursato.
Ama in gabdhaha iyo wiilasha ay guursadaan qof ay qoysaskooda u doortaan.
Laakiin go’aanadaan waa in aad adiga kaligaaga qaadatid.
Waa adiga xaqaaqa shakhsiyeed!
Qofna looma oggola in uu ku xad gudbo xuquuqahaaga.
Waxaad heli kartaa caawimaad haddii qoyskaaga uu sida kale u fikiro oona cadaadis ku geliyo.
Ma ahan mid wanaagsan in waalidkaaga cadaadis kugu geliyo ama kugu saaro bikronimadaada darteeda.
Waxaad caawimaad ka heli kartaa tooska boggagaan internetka ah:
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2016-10-18 10:02:232016-10-18 10:02:23Anigu waxaan ahay gabar 16-sanno-jir ah waxaana sameeyay galmo mana ihi bikrad. Qoyskayga midaan waxaa looga tixgeliyaa ku xad gudub sharafeed. Waxaan ka cabsanayaa qoyskayga in ay midaasi oggaadan. Maxaan sameeyaa?